Rosia: Manintona Ireo Mpandray Anjara Any Amin’ny Faritra Ny Valan-dresaka Mikasika Ny Fitorahana Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Rosia: Manintona Ireo Mpandray Anjara Any Amin'ny Faritra Ny Valan-dresaka Mikasika Ny Fitorahana Bilaogy	Voadika ny 13 Novambra 2012 1:03 GMT
Zarao: Nifampitaona tao Môskoa ny mpitoraka bilaogy Rosiana 200 mahery tamin’ny 29 Oktobra mba hanatrika ilay antsoina hoe “UnForum [ru]” — valan-dresaka tsy manbaraka rafitra mikasika ny fitorahana bilaogy nokarakarain’ny RIA Novosti, notohanan'ny LiveJournal. Raha mahaliana manokana ny fiezahana mafy ataonà masoivoho fanaovan-gazetim-panjakana hanome lanja ny haino aman-jery vaovao, mbola nahasarika mihoatra noho izany ireo toetra hafan’ilay fivoriana.
Fisokafan’ny adihevitra tamin’ny UnForum. Môskoa. Sary nalaina tamin'ny Youtube. 1 Novambra 2012.
Nanindry manokana ny lanjany ara-paritra ny UnForum. Mazava ho azy fa faritra federaly lehibe any Rosia no nihavian'ireo mpandray anjara — avy any Samara ka hatrany Vladivostok — miaraka amin’ny vondronà mpitoraka bilaogy “nisolotena [ru]” ny faritra tsirairay avy (ny sasany tamin'ireo mpandray anjara dia avy any ivelan’i Rosia — nisy “mpitoraka bilaogy maro [ru]” avy tany Transnistria). Nihaino ny teny fanolorana nataon’ny RIAN sy ny Minisitry ny seraseran’i Rosia, ary koa ny solotenan’ny LiveJournal ireo mpitoraka bilaogy. Nanatrika karazana seminera [ru] mikasika ny fomba ahazoana vola amin’ny fitorahana bilaogy sy ny marika manokana izay notarihinà mpitoraka bilaogy malaza toa an’i Ilya Varlamov sy Anton Nosik ihany koa.
Ny fisokafan’ny masoivoho fanaovan-gazety amin’ny fanapariahana ivelan'ireo tsenan'i Môskoa sy ny an'i St. Petersburg, izay toerana mbola tena ifantohan'ireo Rosiana mpampiasa aterineto, dia notohananà tolotra marim-pototra. Nambaran’ny RIA Novosti tao anatin’ilay valan-dresaka fa hatsangana ny “Vondron'ny Fitorahana Bilaogy,” izay hanome an’ireo mpikambana alàlana hijery ireo rakitry ny masoivoho fanaovan-gazety hatramin'ny sary ho takalon’ny fandraisan'izy ireo anjara mavitrika sy ny famoahan'izy ireo lahatsoratra tsy azo zaraina amin'ny hafa. Inona ary no mety ho azon’ny RIAN avy amin’izany fifanarahana izany? Mpitoraka bilaogy avy ao amin’ny faritr'i Altai no manazava petra-kevitra iray:
Raha ny tena izy tokoa dia manomboka mitatra any amin’ireo faritra ny RIA, mila “olona any an-toerana” ry zareo raha ny voalazany. Aiza no hanombohany izany? […] Ny bilaogera no valiny mivandravandra. […] Natolotr'izy ireny antsika androany ny fahafahana hiditra ho isan’ireo mpiseraseran'ny RIA an-jatony avy any amin'ny faritra.
Mahita [ru] i agaffonov, mpitoraka bilaogy avy ao Astrakhan, izay tsy nanatrika, fa tsy mazava mihitsy ny tombony azon’ny mpitoraka bilaogy amin’ny fidirana amin’io vondrona io:
Zavaboahary voavolavolan'ny maha-izy azy ny mpitoraka bilaogy iray. Raha mampiasa ny fitaovan'olon-kafa ny mpitoraka bilaogy iray, na dia tsy misy toa azy aza, dia ho resy izy.
Misy lasa lavitra kokoa tamin’ny fanakianana ny mpitoraka bilaogy sasany, toa an’i Ilya Labunsky mpitoraka bilaogy avy any Krasnoyarsk, izay nanoratra [ru] hoe:
Miezaka mampisitaka ireo mpitoraka bilaogy any amin'ny faritra mba hiala amin'ny politika ry zareo. Hanovàna azy ireo, hampanoratana azy zavatra miendrika tsara, na fara-faharatsiny tsy miandany. […] Raha lazaina amin'ny filaza tsy miambahamba – misy mitady hividy ny mpitoraka bilaogy any amin’ny faritra […]
Ny mpisolotena ny RIA Novosti, Svetlana Mironiuk, dia namaly ireo tsikera ka milaza fa tsy mitombina ny ahiahin'izy ireo, ary hetsika mahaleotena io valan-dresaka io:
tsy nisy nangataka anay hisarika ireo mpitoraka bilaogy, sy hamabo azy ireo amin'ny fomba sasany, hahatonga azy ireo ho azo itokisana na koa hampiasa azy ireo ho fitaovana.
Ary koa, nahatonga resaka kely i Labunsky tao amin'ilay valan-dresaka izay notsikerainy. Nandritra ilay teny fanolorana dia nampiasa fitaovana kely iray malaza izay mampiasa ny rindrina hampisehoana ireo bitsika miaraka amin'ny tenifototry ny valan-dresaka ry zareo mpikarakara. Rehefa namaky ny fiarahabàna avy amin'ny Praiminisitra Medveev ho an'ireo mpandray anjara tamin'ilay valan-dresaka ny Minisitry ny Fifandraisana nandritra ny lanonana fanokafana, nitoraka bitsika [ru] an-katezerana i Labunksy:
#neforum Ndeha mandeha any miaraka amin'i Medvedev -nareo!
Tanaty horaka sy hehin'ny maro, haingana be no nivoahan’ ilay bitsika tsy niriana teo amin'ilay rindrina [ru].
Tantaran'ny Eoropa Afovoany & Atsinanana farany 6 ora izayOkrainaToy Izao No Nitranga Raha Nosazian'ny Fitsarana Rosiana Sazy An-tranomaizina 20 Taona Ilay Okrainiana Mpamokatra Sarimihetsika
Hafanàm-po nomerikaMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaTeknolojiaAkon'ny RuNet